भारतीयकै अटेरीले पटकपटक सीमामा चल्दैछ गोली « Loktantrapost
भारतीयकै अटेरीले पटकपटक सीमामा चल्दैछ गोली
४ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०६:५८
बनियानी, ४ जेठ । भारतीय नागरिकहरुले नेपाली भूमितिर लगाएको मकैबाली उठाउन जबर्जस्ती गर्दा कचनकबल–१ घेराबारीस्थित सीमामा शनिवार राति एक राउण्ड गोली चलेको छ ।
भारतीय नागरिकहरुले नेपाली भूमिमा लगाएको मकै बाली उठाउन जबर्जस्ती गर्ने क्रममा झापाको सीमा क्षेत्रमा गोली चलेको यो दोस्रो घटना हो ।
एक साताअघि झापा गाउँपालिकाको वडा नं. ४ सुकुम्बासी वस्तीमा १३१ नम्बरको सीमास्तम्भ नजिक रहेको नेपाली सुरक्षा पोस्टमा भारतीय नागरिकहरुले हुलहुज्जत गर्दा दुई राउण्ड हवाई फायर भएको थियो ।
रातिको समयमा घरेलु हतियारसहित सयौंको सङ्ख्यामा भारतीयहरु कचनकबलस्थित १२५÷१० नम्बरको सीमास्तम्भ नजिकबाट नेपाली सुरक्षापोस्टमा हुलहुज्जत गर्दै नेपाली भूमिमा पस्न खोजेपछि बाध्य भएर रोक्न एक राउण्ड हवाई फायर गर्नु परेको भद्रपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल २ नं. हेडक्वार्टरका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रेशमकुमार थक्सुले जानकारी दिए ।
नेपाली सुरक्षाकर्मीले फायर खोलेपछि भारतीयहरु भागेका थिए । एक साता अघि झाापा गाउँपालिकामा भारतीय पक्षले माफी माग्दै अबदेखि सीमामा हुलहुज्जत नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो । तर भारतीयको अटेरीले कचनकबलमा आक्रमणको घटना दोहोरिएको छ ।
नेपाली सीमाभित्र भारतीयले लगाएको मकैबाली नेपालीहरुले नै उठाएर थुपारिदिने र विहान दुवै देशका जनप्रतिनिधिको रोहवरमा भारतीयहरुलाई लैजान दिने स्थानीय सहमति भएको थियो । भारततिर नेपालीले लगाएको बाली उठाउन पनि यही नियम पालना गर्ने सहमति थियो ।
भारतीयहरु सहमति विपरीत राति घरेलु हतियार बोकेर सुरक्षापोस्टमाथि आक्रमणमा उत्रिनु नै कचनकबल गोली काण्डको कारण देखिन्छ । भारतीय सीमामा तैनाथ एसएसबीले समेत भारतीयको हुलहुज्जत रोक्न प्रयास गरेको छैन ।